DataNumen BKF Repair - Isbarbardhiga tartanka
Bogga ugu weyn Products DataNumen BKF Repair Isbarbardhiga tartanka
DataNumen BKF Repair Isbarbar
4.90 / 5 (laga bilaabo 1,452 cod)
DataNumen BKF Repair Isbarbardhiga tartanka
Soo-kabashada Kernel ee BKF 8.5.1 Xiddiga Phoenix BKF Soo-kabashada Software-ka 2.0 Soo kabashada ee kaabta 3.0 Kabsado Xogta loogu talagalay MS Backup 1.0 SysTools BKF Dayactirka 5.2.0.1 Dayactir Kaydintayda 4.20
Celceliska Heerka Soo-kabashada * 99.58% 9.09% 9.09% 99.58% 9.09% 78.27% 9.09%
(5MB musuqmaasuq ah) BKF feyl) 100% 0% 0% 100% 0% 100% 0%
(50MB musuqmaasuq ah) BKF feyl) 100% 0% 0% 100% 0% 100% 0%
(100MB musuqmaasuq ah) BKF feyl) 100% 0% 0% 100% 0% 100% 0%
(500MB musuqmaasuq ah) BKF feyl) 100% 0% 0% 100% 0% 100% 0%
(1GB musuqmaasuq BKF feyl) 100% 0% 0% 100% 0% 100% 0%
(2GB musuqmaasuq BKF feyl) 100% 0% 0% 100% 0% 100% 0%
(4GB musuqmaasuq BKF feyl)
(8GB musuqmaasuq BKF feyl)
(10GB musuqmaasuq BKF feyl)
(15GB musuqmaasuq BKF feyl)
Dhammaan noocyada Windows 32bit 98 / ME / NT lama taageerin 98 / ME / NT / 2000 lama taageerin 98 / ME / NT lama taageerin 98 / NT / 2000 lama taageerin 98 / NT / 2000 lama taageerin 98 / ME / NT lama taageerin
BKF Qaabka Taageerada
BKF Faylka ay sameysay NTBackup ee NT4.x / 2000 / XP / Server 2003
Keydinta caadiga ah
Dayactir maalinle ah
Taageerada Kala Beddelashada
Isticmaal habka caadiga ah ee keydka, ka dibna dooro "Ku dhaji kaydintaan keydadka jira" xulashada keydka.
Isticmaal habka caadiga ah ee keydinta, ka dibna dooro "Beddel kaydadka jira" xulashada keydka.
Dib u soo ceshano xog ururin, mug, qaab dhismeedka galka iyo faylalka ku jira BKF gudbiso. Mugga, qaabdhismeedka galka aan la taageerin Mugga, qaabdhismeedka galka aan la taageerin Dataset, mug aan la taageerin Dataset, mug aan la taageerin Cadadka aan la taageerin Qaab-dhismeedka galka lama taageerayo
Ka soo kabso xog-ururin iyo mug badan BKF files.
Repair BKF faylasha ku jira warbaahinta khaldan, sida diskiga diskiga, Zip saxannada, CDROM-yada, iwm.
Looma baahna mudnaan maamule
Raadi oo xulo BKF faylasha la dayactirayo.
Iskuxirka menu macnaha guud ee Windows Explorer.